हाम्राे पिपलबाेट » बर्डफ्लु फैलँदा अन्डा र मासु खाने कि नखाने? यस्तो छ डाक्टरको सल्लाह बर्डफ्लु फैलँदा अन्डा र मासु खाने कि नखाने? यस्तो छ डाक्टरको सल्लाह – हाम्राे पिपलबाेट
बर्डफ्लु फैलँदा अन्डा र मासु खाने कि नखाने? यस्तो छ डाक्टरको सल्लाह
केही दिनअघि केही व्यक्तिले ‘मैले अन्डा खाएको र त्यसपछि घाँटी खसखस गर्ने, रुघा लागे जस्तो भयो’ भन्दै बर्डफ्लु परीक्षणका लागि परामर्श लिन अस्पताल आएका थिए।
नेपालमा हाल चितवन, काठमाडौं लगायत विभिन्न ठाउँमा कुखुरा तथा हाँसमा बर्ड फ्लु (एच फाइब एन वान) देखिएलगत्तै मानिसमा कुखुरा वा हाँसको मासु वा अन्डा खानु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्यौल छ। खाएमा मानिसलाई पनि बर्डफ्लु लाग्छ भन्ने त्रास ब्याप्त छ।
के साँच्चै कुखुरा वा हाँसको मासु वा अन्डा खाँदा बर्डफ्लु सर्छ? यसको उत्तर हो, सर्दैन। किनभने बर्डफ्लुको भाइरस ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पुग्ने बित्तिकै मर्छन्। अन्डा र मासु नेपालीले विशेष गरेर राम्ररी पकाएर खाने भएकाले त्यो सय डिग्री सेल्सियस तापक्रममा धेरै समय पकाएको हुन्छ।
तसर्थ मासु वा अन्डा खाँदा बर्डफ्लु सर्ने प्रश्नै आउँदैन। आजको मितिसम्म विश्वमा कतै पनि मासु वा अन्डा खाएर बर्डफ्लु लागेर मानिसको मृत्यु भएको प्रमाणित भएको छैन। यस्तै, यो रोग मानिसबाट मानिसमा केही अपवाद बाहेक सहजै सर्ने गरेको पनि छैन। तसर्थ राम्ररी पकाएको मासु वा अन्डा खाँदा बर्डफ्लु सर्दैन।
त्यसो भए केमा ध्यान दिने?
अन्डाको सेतो र पहेँलो भागमा भाइरस हुन सक्छ, तसर्थ यी भागहरु पूर्णरुपमा जमेको (पकाएको) मात्र उपभोग गर्नुपर्छ। हाँस, कुखुरा वा अन्य पन्छीको मासु खाँदै हुनुहुन्छ भने पनि राम्ररी पकाएर मात्र खानुपर्छ। अन्डा वा काँचो मासु चलाएको वा छोएको छ भने हात राम्ररी साबुन-पानीले धुनुपर्छ।
धेरै पन्छी एकै ठाउँ र समयमा कुनै कारणबिना मरेको देखिएमा तुरुन्तै कृषि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा सूचना दिनुपर्छ। यसले रोग नसरोस् भन्नका लागि पूर्व तयारीहरु गर्न मद्दत मिल्नेछ।